एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २ फाल्गुन २०७४, बुधबार १७:१६
विराटनगर, २ फागुन । प्रदेश नम्बर १ का एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ । आज दिउँसो ३ बजे प्रदेश १ का प्रमुख डा. गोविन्द सुब्बाले राईलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्नु भएको हो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुब्बाले राईलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको हो । राई एमाले प्रदेश १ का इन्चार्ज एवं पार्टी सचिव भीम आचार्यलाई दुई मतले पछि पार्दै प्रदेश १ को संसदीय दलको नेता बन्नु भएको थियो । प्रदेश १ का एमाले ५१ सांसद मध्ये राईले २६ मत ल्याउनु भएको थियो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी आचार्यले २४ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो ।
एक मत भने बदर भएको थियो । नियुक्ती पत्र बुझेपछि मुख्य मन्त्री राईले भोली सानो आकारमा मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने जानकारी दिनु भयो । भोली दिउँसो विराटनगरमा रहेको विरेन्द्रसभागृहमा राईले मुख्य मन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ ।
कान्छो सांसददेखि मुख्यमन्त्री सम्म
शेरधन राई, बुबा जागिरमान राई र आमा राम्रीमायाँ राईका एउटा मात्रै छोरा हो । उहाँको जन्म भोजपुरको साविकको थिदिङखा गाविस र हालको आमचोक गाउँपालिका ३ मा २०२७ साल फागुन ११ गते भएको हो । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा उहाँ मुलुककै कान्छो सांसद हुनु हुन्थ्यो । भोजपुरको तत्कालिन क्षेत्र नम्बर २ बाट त्यतिबेला निर्वाचित बन्नु भएका उहाँ त्यतिबेला २७ वर्षको मात्रै हुनु हुन्थ्यो ।
एमालेबाट फुटेर बामदेव गौतमको नेत्रृत्वमा माले पार्टी बनेका कारण एमालेका उम्मेदवारलाई चुनाव मुस्किल परिरहेका बेला युवा उम्मेदवार राईले भने सहज जित निकाल्नु भएको थियो । २०५६ सालमा नेपालकै कान्छो सांसद रहनु भएका राई २०७४ साल सम्म आईपुग्दा संघीय संरचनामा गएको मुलुकको माघ २६ गते प्रदेश नम्बर १ को एमाले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हनु भएको थियो ।
दलको नेता विजयी भएसंगै अहिले सम्म राजनैतिक रुपमा विवादरहित राईलाई यो प्रदेशको मुख्य मन्त्री बन्न बाटो २६ गते नै खुलेको थियो । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका उहाँले २०४४ सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नु भएको हो । तीन वर्ष भूमिगत जीवन विताउनु भएका उहाँले पार्टीका विभिन्न कमिटीमा विभिन्न जिम्मेवारी पूरा गरिसक्नु भएको छ । दुई पटक पार्टीको भोजपुर जिल्ला सभापति बनिसकेका उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुँदै यतिबेला बैकल्पिक पोलिटव्यूरो सदस्यको भूमिका हुनु हुन्छ ।
सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका राईले विद्यालय पढ्न जाँदा बिहान बेलुका बस्तुलाई घाँस काट्नुपर्ने भोजपुरबाटै राजनैतिक यात्रा सुरु गरेका एमाले मोरङ अध्यक्ष विनोद ढकालले बताउनु भयो । ०४४ सालमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटी सदस्य बनेका राई अखिलमा जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य हुँदै पूर्वाञ्चलको संयोजक समेत बन्नु भयो । २०५४ सालमा एमाले विभाजन भयो । पार्टी विभाजन भएपछि भोजपुरका अधिकांश अग्रज एमाले नेता मालेमा गए । उहाँ भने जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुग्नु भयो । त्यसपछि जिल्लामा एमालेको शक्तिशाली नेता बन्न उहाँको उदय भयो ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राई दोस्रो पटक संसद बन्नु भयो । दोस्रो संविधानसभाका समेत सांसद राईले संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको सभापति भएर काम गर्नु भयो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रहेका राई माओवादीका सुदन किराँतीसंग पराजित बन्नु भएको थियो । दोस्रो संविधानसभा सदस्य भएकै बेला राई पहिलो पटक मन्त्री र सरकारका प्रवक्ता समेत बन्नु भयो । पहिलो पटक नै उहाँले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पाउनु भयो । राई एमालेभित्रका युवा नेतामध्ये प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ । राई एमालेको टुटफुटबाट कहिल्यै विचलित नभएका नेता हो ।
दोस्रो संविधानसभाको सदस्य हुँदा सुशासन समितिको सभापति बनेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण पनि सोध्नु भएको थियो । शक्तिशाली प्रमुख आयुक्त मानिएका कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा राईको चर्चा चुलिएको हो ।
भलिवलका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी
शेरधन राई खेल क्षेत्रका पनि शौखिन पनि हुनु हुन्थ्यो । खेलकुदमा रुची राख्ने उहाँले १० वर्षको उमेरदेखि नै भलिवल खेल्न थाल्नु भयो । उहाँसंग क्षेत्रीय स्तरका धेरै भलिवल प्रतियोगिता खेलेका अनुभव छन् । आफ्ना मामाले हङ्कङबाट बल ल्याएर दिएपछि खेल क्षेत्रमा लाग्ने उर्जा थपिएको उहाँले सुनाउनु भयो । उहाँ २०४६ सालमा जिल्लाका सवोत्कृष्ट भलिवल खेलाडी बन्न सफल हुनु भयो । उहाँले भलिवलसंगै तेक्वान्दो र टेवलटेनिसका धेरै प्रतियोगितामा सहभागी भएको जानकारी पनि दिनु भयो ।
मुख्यमन्त्री राईको संक्षिप्त जीवनी
नाम : शेरधन राई
ठेगाना : आमचोक गाउँपालिका–३ (साविकको थिदिंखा–५, पसलभन्ज्याङ्ग)
पिता : जागीरमान राई
माताः राम्रीमाया राई
०४४ सालमा अनेरास्ववियुमा संगठित
०४९/५० सालमा अनेरास्ववियु भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष
०५० र ०५३ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रिय सदस्य/पूर्वाञ्चल प्रमुख
०४७ सालमा एमालेको संगठित सदस्यता प्राप्त
०४९ नेकपा एमाले भोजपुरको जिल्ला कमिटी सदस्य
०५१ मा दोस्रो जिल्ला अधिवेशनबाट सचिवालय सदस्य
०५४ मा जिल्ला कमिटीको उपसचिव ०५४ मा पार्टी विभाजन भएपश्चत सचिव
चार कार्यकाल एमालेको जिल्ल्ला अध्यक्ष (०५४–०७०)
०७० वैशाख २७ गते एमाले बैकल्पिक केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित
२०७१ मा एमाले केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित हाल बैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य एंव प्रदेश नं १ सह– इन्चार्ज
०५६ सालको आमनिर्वाचनमा भोजपुर क्षेत्र नं २ वाट १८४४७ मत प्राप्त गरी विजयी (कान्छो सांसद)
०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनवाट पुर्नस्थापित प्रतिनिधी सभा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य,
०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा भोजपुर क्षेत्र नं २ मा पराजित
०७० मंसीर ४ मा सम्पन्न दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भोजपुर क्षेत्र नं २ वाट ११९२७ मत प्राप्त गरी विजयी
२०७१ सालमा संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको सभापति
२०७२ कात्तिक १९ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एंव सरकारको प्रवक्ता
२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा भोजपुर २ बाट २०३३४ मत प्राप्त गरी निर्वाचित (कुल सदर मतको ७१.२३ प्रतिशत मत प्राप्त)
२०७४ माघ २६ गते प्रदेश नं १ नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा २६ मत प्राप्त गरी निर्वाचित
Female Viagra buy online, generic dapoxetine. विदेश भ्रमणः
चीन, रुस, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, वेलायत, मलेशिया, हङ्गकङ्ग आदि ।
विराटनगरमा धान दिवस मनाईयो
असार दोश्रो साता सम्म पूर्वमा ७.२२ प्रतिशत धान रोपाइँ
विराटनगर, ८ जेठ । विराटनगर महानगरपालिका–१४ झटियाईका ५५ वर्षीय सत्यराम चौहानको हत्या उनकै छोराहरुले गरेर...